Aya matanhatu Makiyi Ebhizimusi Logo | Martech Zone
Pane imwe nguva, kana tichitaura nezve marogo, iyo inozivikanwa logo dhizaini yeIBM, UPS, Enron, Morningstar, Inc., Westinghouse, ABC, uye NEXT yakati izvi:
Chiratidzo hachitengesi, chinoratidza.
Kuti uve unonzwisisika uye unomiririra hunhu hwechiratidzo chako, chese chinhu mune yako logo dhizaini chinofanirwa kuve chiripo nekuda kwechikonzero. Chinhu chega chega chinofanirwa kunge chiri kutaura chimwe chinhu nezvechako. Chimiro chaunosarudza, mavara aunosarudza, uye mafonti aunosarudza, anofanira kunge ari chikamu chekubatana uye kupfupisa kwekutaura nyaya.
Kusvikira izvozvi, taona zvimiro zvitanhatu zvinoita kuti logo dhizaini inomanikidza, isingakanganwiki, uye inoenderana neyako mhando.
1. Zvakareruka & Kuparadzaniswa
Zviri nyore ndiyo kiyi. Sezvo yakaoma sehuropi hwemunhu, inosarudza kureruka. Mapatani uye kudzokorora ndizvo zvinhu zvavo. Sezvo ichigadzirisa ruzivo nekumhanya nekupenga nekukurumidza, dhizaini yakapusa haiiti kuti uropi hushande nesimba. Uye nekuda kwekuti inofarira dhizaini yakapusa zvakanyanya, iyo uropi inoirangarira nenzira inoshamisa, inogona kuibata nyore, uye kuinzwisisa zvakakwana.
Kugadzira iri nyore logo dhizaini kwakaoma pane kugadzira yakaoma. Kufunga kwako kunofanirwa kuve kwakachena zvakakwana uye kugashira kusvika pamazano akareruka. Funga nezveMicrosoft, Nike, uye Target, nezvimwewo mazano akareruka, hapana fanfare, uye mamiririro akakwana epfungwa iri kuseri kwechiratidzo.
Chii chinoita kuti logo ibudirire pakuendesa iyo mhando haisi iyo yakawanda dhizaini yezvinhu zvakavakirwa-mukati mayo. Iko kushomeka kwayo, asi uine kugona kutaura zvakaringana izvo zvinoita kuti ive logo inoshanda.
Zaheer Dodhia, Muvambi we LogoDesign.net
Pamusoro pezvo, pfungwa yako yakapusa inofanirwa kunge yakasarudzika. Inofanira kunge iri yeiyo brand uye iyo brand chete. Kana vanhu vakazvitarisa, havafanirwe kufunga nezve chimwe chinhu kunze kwechiratidzo chako.
Kuti ugadzire dhizaini yakadaro, yako tsvagurudzo inoda kunyatsoitwa. Dzidza nezve zvakaitwa nevakwikwidzi vako uye dzivisa kudzokorora zvigadzirwa zvavo. Zvakare, dzidza zvakawanda sezvaunogona nezve dzako muchiso. Nzwisisa kuti zvese ndezvei wobva wauya nazvo kune canvas.
Logo Dhizaini Zvigadzirwa
2. Yakakodzera Bhizinesi Cues
Yese icon, ruvara, kana font sarudzo yaunoita kana uchigadzira logo, inoburitsa meseji. Chimiro chetriangle chinoratidza hutungamiri nekutonga; denderedzwa kusagadzikana uye kukwana. In mavara, orenji inofara uye inoshanda asi bhuruu iri kudzikamisa. Uye izvi zvinoreva zvinoshanduka kana iwe uchinja mumvuri uye hue. Nekudaro, kusarudza izvo maficha ekuwedzera kune yako logo kunofanirwa kuve kunofungisisa uye nekuziva maitiro.
Ngatitii, iwe unoda kugadzira yekushambadzira yakasimba logo uye iwe unoda kuratidza hunyanzvi uye hutungamiriri asiwo unofadza mhando hunhu. Iwe unogona kusarudza kugovera akasiyana maficha kuti utore akasiyana emabhizinesi cues. Semuenzaniso, yako ad logo logo inogona kuratidza hutungamiriri nepo yako font sarudzo inogona kunge iri yekugadzira. Chinhu chinonakidza chinogona kutumirwa kuburikidza nesarudzo yako yemuvara, zvichingodaro.
Chaizvoizvo, iwe unofanirwa kugara uchiziva kuti nei urikuita sarudzo dzekugadzira dzauri kuita uye nekuona kuti ivo vese vari kutaurira rakasarudzika chimiro chechiratidzo.
3. Inoenderana Kune Iyo Indasitiri Uye Brand
Chingave chii yakanaka logo dhizaini kune imwe indasitiri inogona kuve njodzi yakazara kune imwe. Paunenge uchigadzira yako dhizaini dhizaini, funga nezve iyo indasitiri yako brand ndeyako. Wobva wasarudza yako dhizaini yakakosha inoenderana neiyo indasitiri.
Semuenzaniso, kana iwe uri kugadzira logo yeinjiniya, shandisa mifananidzo uye zviratidzo zviri zvemishini Yakatwasuka typography iyo inonzwa inoremedza, uye sarudzo dzemavara dzingave dzisina kwazvakarerekera kana kuburitsa pfungwa yekugwinya. Yako dhizaini pfungwa inofanirawo kuve inoenderana nehunhu hunhu hwauri kuenda. Yako dhizaini sarudzo yemhando yakapfava uye chiratidzo chinokanganisa chingave chakasiyana zvakasiyana.
4. Scalable YeBranding
A logo dhizaini inoratidzwa pane akawanda ekushambadzira mapuratifomu ekunyanyisa kuratidzwa uye inoshanda brand kuona. Kubva pane zvidiki nzvimbo senge pane yeapp icon yetiyiti kuenda kumaturu makuru akadai seguta rebhodhi, logo yako inogona kuve chero kupi. Naizvozvo, gadzira dhizaini iri nyore zvakakwana uye yakasarudzika zvakakwana zvekuti vanhu havana dambudziko rekuiona kana kuinzwisisa zvisinei nehukuru hwayo kana painoratidzwa.
Mune mamwe mazwi, inofanirwa kuve inotyisa uye inopindura. Kana iwe wakashandira graphic dhizaini yeyako brand logo, vabvunze kuti vakutumire iyo yekutanga dhizaini mafaira kuti iwe ugone kuve nerusununguko rwakakwana kuyera logo yako kumusoro kana pasi. Kana iwe uri kutora iyo logo kubva kune yepamhepo logo inogadzira sevhisi, ita shuwa yekusarudza dhizaini package iyo inokupa iwe vector faira yeiyo logo. Iyo vector fomati inochengetedza mhando yeiyo dhizaini isina kumira kana iwe uri kuyera logo.
5. Zvakawanda Zvekushambadzira
Iyo inoshanda brand logo inoda kuve nemisiyano. Kana iwe ukasarudza ayo maficha kana kushandura ayo mavara kana marongero, iyo inofanirwa kunge ichiramba iine ayo akasiyana dhizaini Funga nezve Apple logo zvakare. Kupemberera Mwero wekuzvikudza, iyo logo inoteedzera yayo yakajairwa matoni epasi uye inotora iwo akajeka mavara eiyo muraraungu. Asi chimiro cheapuro icon ichiri chakasiyana - saka tinoziva kuti ndechipi chiratidzo.
Paunogadzira mucherechedzo wechiratidzo, funga nezvekuti iwo akasiyana maficha anogona kushanda zvakazvimiririra kana pavanoshandura nzvimbo. Misiyano yemhando inokubvumidza kupemberera zviitiko zvakakosha, kuratidza chiitiko, kana kuve chikamu chechikwata chakakura nguva yese ichiwedzera rako rekusvikira uye usingaregi kuenda kwako chiziviso.
Yehunyanzvi yakagadzirirwa dhizaini dhizaini dhizaini inofanirwa kunge iine logo akasiyana senge icon-chete dhizaini, yakasviba-uye-chena ruvara sarudzo, imwe-color sarudzo, zita-chete sarudzo, zvichingodaro.
6. Chisingakanganwiki Kune Zvirinani Yeuka
Kana iyo logo dhizaini iri nyore uye yakasarudzika, inowedzera kuyeuka. Izvo zvakapfava zvinoita kuti zvive nyore kunzwisisa nepo kutaridzika kwakasarudzika kunotipa chimwe chinhu chakasarudzika kutarisisa. Kana vakauya pamwe chete, tinopedzisira tagadzira yakasarudzika dhizaini iri nyore kurangarira. Ese akakurumbira logo zvigadzirwa mupasi ane hunhu uhwu.
Kugadzira dhizaini isingakanganwiki hakusi nyore, asi zvakakosha. Iwe haudi yako logo yechiratidzo kuti izvirasire yega mugungwa remazita ekuzivikanwa mazita. Kubudikidza neyakaenzana yekuziva kwemavara, maumbirwo, mafonti, uye masitayera, gadzira chitarisiko chinogara mundangariro dzevanhu kwenguva refu mushure mekunge vaona logo. Inofanira kuita fungidziro mu kutanga mashoma mashoma echipiri.
Kwandiri, izvi zvitanhatu zvakakosha hunhu hunofanirwa kunge huripo mune logo dhizaini kuti ibudirire. Chii chimwe chaungawedzera? Kusingaperi nguva ndechimwe chinhu chikuru chinochengetedza logo yako kwemakore anouya. Uye kana iwe uchinge uchishingairira kuzadzisa iyi mitanhatu yepamusoro mirairo yeakanaka logo dhizaini, mikana iwe watogadzira iyo isingagumi mufananidzo.
Nekudaro, shevedzera kunze mune zvakataurwa pamusoro pechinhu chipi chaunofunga kuti chakanyanya kukosha uye chinotyaira chiziviso kumberi.
Tags: logo yeapuroapple kudada logologo yebhizinesigadzira mucherechedzologologo maitirologo dhizainilogosMicrosoftMicrosoft logonikechinangwa